Farmaajo oo cadeeyay mowqifka Soomaaliya ee xaalada Suudaan
By WARIYAHA KHAAHIRA , GAROWE ONLINE
KHAAHIRA, Masar - Madaxweynaha Soomaaliya oo ku jira qaar kamida hogaamiyeyaasha Afrika ee uga qaybgashay dalka Masar shir ku saabsan xaalada Suudaan ayaa midnimo u muujiyay shacabka dhibaateysan.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladiisu ay ku garab taagan tahay dadwaynaha Suudaan "himilooyinka iyo doonista ku aaddan nabadda, amniga iyo inay si buuxda u adeegsadaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed."
Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirkaasi rajo wanaagsan ka muujiyey in xaalada kacsan ee Suudaan sida ugu dhaqsiyaha badan u degto, isla markaana kala dambeynta ay soo laabato.
Suudaan ayaa dhexda ka gashay qalalaaso siyaasadeed markii la afgambiyey Cumar Xasan Al Bashiir, madaxwaynihii 30-sano talada hayey, kaasi oo haatan xabsi ku jiray.
Hoos ka akhriso khudbada Farmaajo oo dhameystiran
Madaxweyne Al-Bashiir ayaa markii hore casuumey Farmaajo, isagoo doonayay inuu u kala...
Soomaaliya oo mowqif ka qaadatay heshiiska dhinacyadda Suudaan
Soomaliya 05.08.2019. 13:52